Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. भिटामिन–ए र जुकाको औषधी खान छुटेका बालबालिकालाई आइतबार पनि खुवाइने – Emountain TV
काठमाडौं, २ कात्तिक । शनिबार देशभर ५ बर्ष मुनिका बालबालिकालाई भिटामिन–ए र जुकाको औषधी खुवाइएको छ । मुलुकभर २७ लाख बालबालिकालाई भिटामिन–ए र २४ लाख बालबालिकालाई जुकाको औषधी खुवाउने सरकारको लक्ष्य छ । शनिबार खान छुटेका बालबालिकालाई भने आइतबार पनि खुवाइने छ ।
सरकारले मुलुकभर ६ महिनादेखि पाँच बर्षसम्मका करिब २७ लाख बालबालिकालाई भिटामिन–ए र एक बर्षदेखि ५ बर्ष मुनिका २४ लाख बालबालिकालाई जुकाको औषधि अल्वान्डाजोल खुवाइरहेको छ । साथमा सरकारले बालबालिकाको पोषणको अवस्था हेरेर बालभिटा समेत वितरण गरेको छ । २७ लाख बालबालिकालाई भिटामिन खुवाउनुका साथै पाखुराको नाप्ने काम समेत गरिरहेको हो ।
बालबालिकाको पोषणको अवस्था पत्ता लगाउन पाखुराको नाप लिने पनि गरिन्छ । पाखुराको स्थितिबाट कुषोषण भएका बालबालिकालाई पोषण आहारका बारेमा स्वास्थ्यकर्मीले जानकारी समेत दिने गरेका छन । बालभिटाले बालबालिकालाई पुड्को हुनबाट जोगाउँछ । पछिल्लो समय जुकाको औषधि तथा भिटामिनको अभावमा बालबालिकाहरुमा विभिन्न समस्या देखिने भएकाले भिटामिन तथा जुकाको औषधि अनिवार्य खुवाउनैपर्नै स्वास्थयकर्मी बताउछन् ।
भिटामिन–ए को कमीले बालबालिकामा रतन्धो, स्वासप्रश्वास र पाचन प्रक्रियामा समस्या देखा पर्ने भएकाले भिटामिन ए र जुकाको औषधी हरेक ६ महिनामा खुवाउनु पर्ने चिकित्सकको भनाई छ ।
सरकारले राष्ट्रिय भिटामिन–ए कार्यक्रम तथा जुकाको औषधी निशुल्क वितरण गर्दै आएको छ । तर जनचेतनाको कमीका कारण अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । आवश्यक प्रचारप्रसार र जनचेतनाको अभावले गर्दा बर्षेनी कार्यक्रममा सहभागी हुने बालबालिकाको संख्या घट्दै गएको छ । भिटामिन तथा जुकाको औैषधी खान आउने बालबालिकाको संख्या भौगोलिक विकटताका आधारमा पनि कम हुने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन ।
उपत्यकाका अस्पतालमा भने पछिल्लो समय बालबालिकामा रतन्धो र जुकाको कारणले रक्तअल्पता भएका विरामीको संख्या घट्दै गएको छ ।
सरकारले भिटामिन ए र जुकाको औषधी वितरण कार्यक्रमका लागि मुलुकभर ७ सय ५३ स्थानिय तहका ५२ हजार स्थानमा स्वास्थ्य स्वंयसेवकहरु परिचालन गरेकोे छ, भने ३ करोड ५० लाख बजेट खर्च छुट्याएको छ ।